Fitaovana Telma simba : miverina tsikelikely ny tambajotra | NewsMada
Fitaovana Telma simba : miverina tsikelikely ny tambajotra
Niainga tany Cape Town Afrika Atsimo, ny alahady teo tamin’ny 10 ora GMT (amin’ny 1 ora tolakandro ora Madagasikara) ny sambo manokana CS Leon Thevelin, hanamboatra ny tariby mitondra tambajotra (cable) Eassy ampiasain’ny Telma any amin’ny 38 km miala ny morontsirak’i Toliara, any amin’ny 2.600 metatra ambanin’ny ranomasina. Nilaza ny administratera tale jeneraly (ADG)-n’ny Telma, Patrick Pisal-Hamida, fa mahatratra 3.000 km ny elanelan’i Cape Town sy i Toliara, ary tany Port Elisabeth Afrika Atsimo ilay sambo, omaly. Nohamafisiny fa voaaraka tsara drafitra sy ny fotoana nalamina, ka higadona any Toliara amin’ny zoma 3 febroary ho avy izao ity sambo ity. Hisy teknisianina roa avy amin’ny Telma hanampy ireo mpiasa amin’ity sambo ity.
Efa miezaka mamaha ny olana ny Telma. Efa mahazo internet ny mpanjifa miisa 3 tapitrisa. Natao laharam-pahamehana kosa ny orinasa amin’ny fahazoana web, azo ampiasaina mandritra ny ora fiasana satria mitondra fampandrosoana lehibe amin’ny lafiny toekarena. Miasa tontolo andro (24 ora/24 ora) kosa ny mail, ny finday ary ny sms.
Tsiahivina fa nitranga ny alarobia 25 janoary teo ny fahasimbana. Nampandrenesina avy hatrany ny orinasa Noc Eassy, miandraikitra ny tambajotra iraisam-pirenena any ambany ranomasina, ary nomanina ilay sambo, sady mitondra tariby “cables”, mirefy 75 km, miampy kojakoja samihafa.